Mudaneyaasha Baarlamaanka oo maanta kulan ku leh magaalada Muqdisho – Radio Muqdisho
Mudaneyaasha baarlamaanka ayaa maanta kulan ku yeelanaya magaalada Muqdisho, ayagoo uga hadli doona sharciyada Hanti-dhowrka qaranka iyo Xeerka doorashooyinka.
Xildhibaan Maxamed Cumar oo Radio Muqdisho wareysi siiyay saakay, ayaa sheegay in akhrinta saddexaad ay marayaan labadaasi sharci, ayna suurta gal tahay in isla maanta ay cod u qaadaan xildhibaanaddu.
Guddiyada maaliyadda iyo doorashooyinka ee baarlamaanka ayaa gacanta ku hayaha labadan sharci oo lagu soo daray agagtiyadii ka soo baxay akhrintii 1aad iyo 2aad ee ay mudaneyaasha baarlamaanku horay ugu sameeyeen xeerarkaan.
Guddoomiyaha Baarlamaanka ayaa horay xildhibaanada uga codasaday in kalfadhigaan lagu meel mariyo labadan sharci oo muhiim u ah dalka xilligaan la doonayo in 2016-ka doorasho laga qabto waddanka oo dhan.
Barnaamijka Bandhigga Wareysiyada ee Radio Muqdisho